Kooxda Al-Shabaab oo dad shacab ah ku laysay Galgaduud | KEYDMEDIA ONLINE
Kooxda Al-Shabaab oo dad shacab ah ku laysay Galgaduud
Kooxda Al-Shabaab, ayaa caawa weerar ku qaadday dad shacab ah oo ku dhaqan degaan loo yaqaan Tuulo-xayow, oo u dhaxeya Duusamareeb iyo Guraceel.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in caawa Kooxda Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ka fuliyeen inta u dhaxeysa degaanka Ceeldheere iyo magaalo Madaxda Gobolka ee Dhuusamareeb.
Degaanka Tuulo-xayow, oo qiyaastii wax ka yar 8 KM dhanka qorrax u dhaca ka xiga Xarunta Dowlad goboleedka Galmudug, ayay soo weerareen rag ka tirsan Al-Shabaab, waxayna iska cabin kala kulmeen dadka degaanka.
Ugu yaraaan geerida Saddex ruux oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay, dhawacyo intaas ka Abadan ayaana la geeyay isbitaallada magaalada Dhuusamareeb, halka la warinayo in qaar ka mid ah odayaashii Tuulada nolol iyo geeriba la la’yahay.
Wararku waxa ay intaas ku darayaan in Al-Shabaab dab qabadsiiyeen gaaari, kadibna ay ka baxsadeen goobta ay weerarka ka geysteen, ka hor inta aysan soo gaarin ciidanka Dowladda Fadaraalka iyo kuwa Galmudug.
Ma’aha markii koobaad oo Al-Shabaab dhib ka geystaan inta u dhaxeysa Guriceel iyo Dhuusamareeb, dhow weerar ayayna ka geysteen tan iyo markii ay Maamulka degaanadas banneeyeen Culumadii Ahlu Sunna Wal Jamaaca.